Lapho usuthathe isinqumo sokuyisebenzisa | Ota Ward Hall Aplico
Indlela yohlelo lokusebenza nokugeleza kokusetshenziswa>
Umhlangano wangaphambi komklomelo
Lapho usebenzisa ihholo elikhulu, ihholo elincane negumbi lombukiso
Noma uma usebenzisa izinsizakusebenza ekuzijabuliseni okubonakala kudingekile ekuphathweni kwesikhungo, ethembeni lokuthi inyanga eyodwa ngaphambi kosuku lokusetshenziswa njengomthetho ojwayelekile uletha le mibhalo elandelayo, sicela uye kumabhalane nasemihlanganweni.
Uhlelo noma ishadi lokuqhubeka, ipheshana, uhlelo lokuphepha, ithikithi lokungena noma ithikithi elinenombolo (njengesampula)
Ngaphezu kwalokhu okungenhla, imicimbi esehholo elikhulu ifaka umdwebo wasesteji, umdwebo wokukhanyisa, nomdwebo we-acoustic.
(Uma unganqumi, sicela usazise igama lomuntu ophethe kanye nemininingwane yokuxhumana naye.)
Lapho usebenzisa isitudiyo
Sicela uxoxe nabasebenzi mayelana nokuhlelwa kwekamelo kanye nezinsiza ezifanele ezizosetshenziswa okungenani ezinsukwini ezimbili ngaphambi kosuku lokusetshenziswa.
Lapho uthengisa impahla
Sicela uqiniseke ukuthi uthumela "Isicelo Sokugunyazwa Kokuthengiswa Kwempahla" esehlukile.
Isicelo sokuvunyelwa kokuthengiswa kwempahla
Izimpahla azikwazi ukuthengiswa estudiyo
Isaziso esiya emahhovisi kahulumeni afanele, njll.
Ngokuya ngokuqukethwe yilo mcimbi, kungadingeka ukuthi kwaziswe amahhovisi kahulumeni alandelayo afanele.
Sicela uhlole kusengaphambili bese ulandela izinqubo ezidingekayo.
Ukusetshenziswa komlilo, njll. Isigaba Sokuvikela uMnyango Wezomlilo waseKamata
2-28-1 Kamatahoncho, Ota-ku Ucingo: 03-3735-0119
Ezokuphepha njll. Isiteshi Samaphoyisa Kamata
2-3-3 Kamatahoncho, Ota-ku Ucingo: 03-3731-0110
著作 権 I-Japan Music Copyright Association
IJASRAC Tokyo Concert Branch
160-0023-1 INishi-Shinjuku, iShinjuku-ku, 17-1
INippon Life Shinjuku West Exit Building 10F Ucingo: 03-5321-9881
Ukufakwa kwezikhangiso / izaziso
Sicela ucacise igama lomhleli, imininingwane yokuxhumana, njll kumaphosta, amapheshana, amathikithi okungena, njll.
Uma ungathanda ukufaka izingqwembe namapheshana ehholo, sicela usazise. (Kukhawulelwe emicimbini ebanjelwe ehhotela)
Sicela usazise uma ufuna ukuthumela ibhodi lezimpawu.
Imininingwane ngemicimbi ingathunyelwa mahhala kumagazini wolwazi oshicilelwe yi-Ota Ward Cultural Promotion Association naku-website. (Ngokuya ngokuqukethwe, asikwazi ukukwamukela)
Sicela ugcwalise ifomu eliqokiwe bese ulithumela kumuntu ophethe leyo ndawo.
Uhlelo lwesicelo sokushicilelwa kolwazi lomcimbi wekhasi eliyisiqalo lesithathu
Mayelana nokuphathwa kwezikhungo
Ngosuku lokusetshenziswa, sicela wethule ifomu lokuvumela ukusetshenziswa endaweni yokwamukela ngaphambi kokusebenzisa igumbi.
Ukulungiselela inhlekelele, sicela uthathe zonke izindlela ezinjengokukhishwa kwabavakashi, ukuthintana nabezimo eziphuthumayo, usizo lokuqala, njll., Ngokuba nomhlangano oningiliziwe nabasebenzi nokunikeza abasebenzi abangahlelayo kabusha.
Ngaphansi koMthetho Wezinsizakalo Zomlilo, sicela ubhekisise amandla ezivakashi.Ayikwazi ukusetshenziswa ngaphezu kwamandla.
Uma kwenzeka ingozi noma umuntu ogulayo, yazisa abasebenzi ngokushesha bese ulandela imiyalelo.
Sicela wazi ukuthi ihhotela alinasibopho sokweba.
Kukhona igumbi labantwana esitezi sokuqala.Uma ufuna ukuyisebenzisa, sicela wazise abasebenzi.Sicela uyiphathe ohlangothini lomsebenzisi.
Ngemuva kokusebenzisa, sicela ubuyisele okokusebenza okwenzekile kusimo sokuqala.Ngaphezu kwalokho, sicela uqiniseke ukuthi uhamba nezimpahla zakho ungazishiyi endaweni.
Ngokuyinhloko, uma isikhungo noma okokusebenza kulimele noma kulahlekile, kuzodingeka ukuthi unxephezele umonakalo.
Sicela uthathe yonke imfucuza eyenziwe esiteji, njengodoti odalwe ukudla nokuphuza.Uma kunzima ukuyisa ekhaya, sizoyicubungula ngemali ethile, ngakho-ke sicela usazise.
Uma kunesidingo sokuphatha indawo, umsebenzi angangena egumbini olisebenzisayo.
Umhleli unesibopho sokuhlela nokuqondisa izivakashi, ukubamba, nokujabulisa.Ngokuya ngomcimbi, umhleli angalungiselela abasebenzi besiteji, ukukhanyisa, umsindo, njll.
Uma kulindeleke ukuthi inani elikhulu lezivakashi lizofika ngaphambi kwesikhathi sokuvula, noma uma kungenzeka kube nokudideka ngesikhathi somcimbi, kungumsebenzi womhleli ukwaba abahleli abenele.
Sicela uqinisekise ukuthi umgqugquzeli ubheka okulandelayo futhi azise izivakashi.
Unganamatheli iphepha, itheyiphu, njll ezindongeni, ezinsikeni, emawindini, eminyango, phansi, njll., Noma ushaye izinzipho noma izikopelo ngaphandle kwemvume.
Ungathengisi noma uveze izimpahla, usabalalise izinto eziphrintiwe, noma ngenye indlela wenze okufanayo ngaphandle kwemvume.
Musa ukuletha izinto eziyingozi noma izilwane (ngaphandle kwezinja zensizakalo) ngaphandle kwemvume.
Ukubhema akuvunyelwe esakhiweni sonke.Ungadli, ungaphuzi noma ungabhemi ngaphandle kwasezindaweni eziqokiwe
Ungakhiqizi ivolumu engaphazamisa ukuphathwa kwesikhungo noma ibangele ukuphazamiseka kwabanye.
Musa ukudala ukuphazamiseka kwabanye, njengokwenza umsindo, ukumemeza, noma ukusebenzisa udlame.
Mayelana nokusetshenziswa kwendawo yokupaka
Sicela usebenzise iphunga elisebenza esigcemeni sokupaka ngaphansi komhlaba (umkhawulo wokuphakama u-2.1 m).
Umhleli uzokhokhelwa mahhala ukupaka ngosuku, kepha kunomkhawulo enanini lezimoto kuye ngesikhungo.
Yonke indawo yokupaka yabasebenzisi abavamile izokhokhiswa.
Ukusetshenziswa kwesihlalo esinamasondo
Izindlu zangasese ezifinyeleleka ngezihlalo zabakhubazekile zitholakala esitezi sokuqala naphansi kwe-1 nasehholo elikhulu (isitezi sokuqala).
Izihlalo ezinamasondo nazo ziyatholakala kulesi sakhiwo, ngakho-ke sicela usazise uma ufisa.
Uma ufaka endaweni yokupaka engaphansi komhlaba, sicela usebenzise ikheshi.